Non classé | Programme MATOY
Fiantsoana mividy na mpanodina varimbazaha vokatra eto Madagasikara
Ny Fandaharan’asa MATOY dia vatsian’ny Fiaraha-miasa soisy ary tantanan’ny ONG SAHA, AIM et HELVETAS. MATOY dia miaraha-miasa mivantana amin’ny mpandraharaha ara- toekarena mba hampirindra miaraka ny filan’ny tsena sy ny mpamatsy vokatra.
Ny taona 2013, MATOY no nanomboka miara-miasa mivantana amin’ny orinasa Les Moulins de Madagascar Lafarinina ary manamora ny fifandraisan’ny mpiara-miombon’antoka mpanodinana varimbazaha vokatra eto an-toerana sy ny fanodinana ho lafarinina eto an- toerana izay araka ny fenitry ny tsena.
Manitatra ny fiaraha-miasa amin’ny mpandraharaha hafa ny Programa ankehitriny.
Ireo tambazotran’ny mpamatsy varimbazaha eto Vakinankaratra, izay mamatsy ny orisanasa mpanodina lafarinina « KOBAMA taloha », dia afaka mamokatra mihoatra ny 800 taonina ny 2016. Ary tsy nitsahatra nitombo avo roa heny ny vokatra isaky ny taom-pamokarana.
Ity Antso ity dia natao mba hanampy ireo tambazotran’ny mpamatsy varimbazaha vokatra eto an-toerana hanomana dieny izao 2016 izao ny famokarana sy famatsiana varimbazaha amin’ny taona 2017 arakaraky ny tadiavin’ny tsena.
Noho izany dia asaina ireo mpandraharaha mpanao mofo, mpanangom-bokatra, mpividy na mpanodina lafarinina liana hanjifa sy hampiasa varimbazaha vita 100% eto Madagasikara , mba handefa filazana sy tolotra mba ho voaray anatin’ny mpividy manomboka ny taona 2017.